Shuruudaha dayn cafinta iyo halka soomaaliyo mareyso – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Shuruudaha dayn cafinta iyo halka soomaaliyo mareyso
Deynta cafinta wadamada saboolnimadka nidaam la yidhaahdo ayay rabtaa iney marto soomaaliya oo la yidhiido “HIPC” oo loo soo gaabiyey “Heavily Indebted Poor Countries” wadamada faqiirka ah ee dayn badan lagu leeyahay,
barnaamijkan iyo xiliga la aas aas xagan hoose kaga bogo
Barnaamijka “HIPC Initiative” waxaa soo saaray IMF iyo Bangiga Aduunka sanadkii 1996, iyada oo ujeedadu tahay in la hubiyo in wadan xun oo wajahaya culays deyn ah oo uusan maareyn karin. Tan iyo markaas, bulshada maaliyadeed ee caalamiga ah, oo ay kujiraan ururo badan oo iskaashato ah iyo dowlado, waxay si wada jir ah uga wada shaqeeyeen sidii hoos loogu dhigi lahaa heerar waara oo deynka deynta dibadaha ee wadamada saboolka ah ee sida aadka ah loogu leeyahay.
Sanadkii 1999, dib u eegis ballaaran oo lagu sameeyay barnaamijka ‘Initiative’ ayaa loo oggolaaday Sanduuqa inuu bixiyo dhaqso, qoto dheer, iyo yareynta deynta balaaran iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya gargaarka deynta, yareynta saboolnimada, iyo siyaasadaha bulshada.
Sannadkii 2005, si loo caawiyo dardargelinta horumarka laga gaadho Yoolalka Qaramada Midoobay ee Himilooyinka Horumarinta (MDGs), HIPC Initiative ayaa lagu kabo Barnaamijka Labaad ee Deynta Relief Initiative (MDRI). MDRI waxay oggol tahay in 100% gargaar laga helo deymo u qalma seddex hay’adood oo dhinacyo badan – IMF, World Bank, iyo Sanduuqa Horumarinta Afrika (AfDF) – oo ah waddammada dhameystiraya hannaanka HIPC. Sanadkii 2007, Bangiga Horumarinta Mareykanka (IaDB) wuxuu kaloo go’aansaday inuu siiyo deyn dheeri ah (“wixii ka baxsan HIPC”) gargaarka deynta shanta HIPC ee Galbeedka Hemisphere.
marka la doonayo in wadamadaa laga cafiyo dayn waxay marayaan habkan iyo shuruuudahan laba hab oo la yidhaahdo decision point oo ay hada soomaaliya mareyso iyo complete point oo mudo hal sano kadib la gaadhayo marka la buuxiyo shuruudaheeda oo ku jiro ugu yaraan hal sano.
Wadamadu waa inay la kulmaan shuruudaha qaarkood, ay ka go’antahay yareynta saboolnimada iyada oo loo marayo isbeddelada siyaasadaha, oo ay muujiyaan rikoor fiican oo muddo socda ah. Sanduuqa iyo Bangigu waxay bixiyaan ku-meel-gaarka deynta ku-meel-gaadhka ah marxaladda hore iyo, marka waddan la kulmo ballanqaadyadiisa, deyn dhammaystiran ayaa la bixiyaa.
Tallaabada koowaad: barta go’aanka. Si loogu tixgeliyo kaalmada HIPC ee bilowga ah, waddan waa inuu buuxiyo afarta shuruudood ee soo socda: waana barta soomaaliya mareyso imika. waana iney kasoo baxdaa shuruudahan.
1) Inaad xaq u leedahay inaad ka amaahato Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah ee Bangiga Adduunka, oo bixisa amaahda aan dulsaarka lahayn iyo deeqaha dalalka saboolka ah iyo IMF ee Yaraynta Saboolnimada iyo Koboca kobcinta, oo deyn siisa waddammada dakhligoodu hooseeyo ee lagu kabayo kabista;
2) Soo wajihi culeys deyn aan la qaadan karin oo aan looga hadli karin qaababka deynta dhaqameed ee caadiga ah;
3) Waxay dejisay rikoor dib u habayn ah iyo siyaasadaha saxda ah iyada oo loo marayo barnaamijyada IMF- iyo Bangiga Adduunka ay taageerayaan; iyo
4) Waxay sameysay Warqadda Istaraatiijiyadda yareynta Saboolnimada (PRSP) iyada oo loo marayo geedi socod ka qaybgal ballaaran oo sal ballaadhan oo dalka ka dhaca.
Mar haddii dal uu la kulmay ama sameeyay horumar ku filan oo ka soo baxa shuruudahan afarta ah, Guddiyada Fulinta ee IMF iyo Bangiga Adduunka ayaa si rasmi ah u go’aamiya u-qalmitaanka ka-kabashada deynta, bulshada caalamkuna waxay ku dadaaleysaa yareynta deynta ilaa heer loo arko inay sii jiri karto. Marxaladan koowaad ee HIPC Initiative waxaa loo yaqaanaa meesha go’aanka. Mar alla markii waddan gaadho halka go’aankeeda laga gaadho, waxay isla markiiba bilaabi kartaa ka-kabashada ku-meelgaadhka ah ee adeegga deynta ay u dhacday awgeed.
Tallaabada labaad: Barta dhammaystirka. Si loo helo hoos u dhigid buuxda oo aan lagala tashan karin deynta laga heli karo barnaamijka ‘HIPC Initiative’, dal waa inuu
1) Sameynta rikoor dheeri ah oo ku saabsan waxqabadka wanaagsan ee hoos yimaada barnaamijyada ay taageerayaan amaahda IMF iyo Bangiga Adduunka;
2) In la hirgeliyo dib-u-habeyn muhiim ah oo lagu qanco goobta go’aanka; iyo
3) Korsashada iyo hirgalinta barnaamijka ‘PRSP’ ugu yaraan hal sano.
Mar haddii dal uu buuxiyo shuruudahan, wuxuu gaari karaa heerkiisa dhammaystirka, kaasoo u oggolaanaya inuu helo deyn dhammaystiran oo lagu ballanqaado barta go’aanka.
Wadamada qaata deynta laga cafiyo. 39ka waddan ee u qalma ama u-qalma kaalmada HIPC Initiative, 36 waxay ka helaan deyn buuxda IMF iyo deyn-bixiyeyaasha kale ka dib markay gaaraan qodobbadoodii dhammaystirka ahaa. Saddexda dal, oo loo aqoonsaday inay suurogal u leeyihiin kaalmada HIPC Initiative, ayaan wali gaarin qodobbadooda go’aankooda, laakiin Soomaaliya waxay sameyneysaa horumar xagga horumarka ah laga gaaro bilaha soo socda
linkaga hoose kala soco warbixintan oo english ah iyo website IMF
162-ruux oo lagu badbaadiyay Badweynta u dhexeysa Libiya &Talyaaniga